Archive du 20190102
Kianjan’ny 13 Mey Ho rakotra vahoaka anio…
Andro faharoa ho an’ny taona 2019 ity alarobia 2 janoary ity, ary faharoa ihany koa amin’ny hetsika hiarovana ny safidim-bahoaka noho ny hosoka sy halatra tamin’ny fifidianana. Tamin’ny sabotsy 29 desambra 2018 teo no nanombohany.
Filankevitry ny fampihavanana Malagasy Miantso ny feon’ny fieritreretan’ny HCC
Mandala hatrany amin’ny maha raiamandreny azy ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy (CFM), hoy ny filohany, Maka Alphonse, ary manao antso avo amin’ny hisian’ny fitoniana sy filaminana amin’izao taom-baovao izao.
Prefen’Antananarivo Ampirisihina hihantsy ady amin’ny vahoaka ?
Nafana ny adihevitra halina manoloana ny resaka fandraran’ny Prefektiora tamin’ny alalan’ny Prefen’Antananarivo Jeneraly Ravelonarivo Angelo Christian ny tsy fahazoana mampiasa “écran géant”
Hery Rajaonarimampianina Miandrandra fitoniana ho an`ny Malagasy
Nitondra firariantsoa ny filoham-pirenena teo aloha, Hery Rajaonarimampianiana, ho an`ny vahoaka Malagasy.
Hetsiky ny vato fotsy Nametraka fangatahana teny amin’ny HCC koa
Ny tolakandron’ny alatsinainy 31 desambra 2018 teo no tafapetraka teo anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na HCC ny fangatahan-dry zareo avy eo anivon’ny hetsiky ny vato fotsy.
Vahaolana momba ny fifidianana Manana safidy 3 ny HCC
Efa mazava ny fanapahan-kevitry ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI), izay nilaza fa nandresy tamin’ny fifidianana filohan’ny repoblika fihodinana faharoa i Andry Rajoelina.
Rivo Rakotovao “Tsy ankasitrahana ny fanodinkodinana safidim-bahoaka”
Niarahaba ny vahoaka Malagasy noho ny asaramanitra ny Filoham-panjakana mpisolo toerana Rivo Rakotovao, ka nirary ny sokajin’olona rehetra hahatratra ny tanjona hotratrarina amin’ity taona vaovao 2019 ity.
Praiminisitra Ntsay Christian Miantso ny vahoaka hiandry voka-pifidianana am-pitoniana
Amin’izao andro farany amin’ny taona 2018 izao dia naneho fisaorana feno ho an’ny vahoaka Malagasy rehetra ny praiminisitra sady lehiben’ny governemanta,
Tontolo politika taona 2019 Hanatsara ve sa hanimba ny fiainam-pirenena ?
Maro ireo zava-nitranga tamin’iny taona 2018 iny. Teo ny lafiny tsy fandriampahalemana.
Fifidianana filoham-pirenena 300 mahery ireo fitoriana eny anivon`ny HCC
Raha ny tatitra voaray teo anivon`ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) dia ity fifidianana filoham-pirenana fihodinana faharoa ity no nandraisana fitoriana sy nahazoana fitarainana betsaka indrindra satria miisa 305 izany.
Toe-draharaham-pirenena Hafana ny taona 2019
Mitohy amin’izao taona 2019 izao ny tarazan’ny 2018, raha ny politika sy ny raharaham-pirenena no zohiana.
MBA MAHALALÀ MENATRA E !
`Zay mahatolotolotra ihany ary ve No lazaina fa tompon`ilay fandresena ? Mba mahalalà menatra olona re Ry komity mitonona ho mahaleotena !
Fanatanjahantena Malagasy Nisongadina ny fahatafitan’ny Barea hiatrika ny CAN 2019
Miditra amin’ny andro faha-2 sahady ny taona vaovao 2019 anio alarobia 02 janoary ka hanararaotan’ny mpikirakira ny vaovaom-panatanjahantena hiarahabana ny mpitia fanatanjahantena Malagasy tsy an-kavavaka sy ny Malagasy tsy vakivolo nahatratra an’ity taona 2019 ity.
Basket Tournoi du Baobab 2018 Namaranan’ny ligin’i Boeny ny taom-pilalaovana
Toy ny fanaon’ny ligin’ny basikety baolina any Boeny isaky ny volana desambra isan-taona dia tontosa tao amin’ny Complexe Sportif Mahajanga tamin’ny sabotsy 29 sy tamin’ny alahady 30 desambra lasa teo ny « Tournoi du Baobab » 2018 izay nifanandrify indrindra tamin’ny fanamarihana ny andiany faha-10 amin’ity fifaninanana ity.
Ligy rejionalin’ny Basikety any Bongolava Nahatontosa ny Tournoi "Manala Basket"
Nifarana ny alahady 30 desambra teo tany Tsiroanomandidy ny fifaninanana basikety baolina « Tournoi Manala Basket » nokarakarain’ny ligy rejionalin’ny taranja basikety any Bongolava.
Edito Sokafy ny maso !
Nivalona iny ny taona 2018. Arahabaina isika rehetra izay nahatafita azy iny.
Andron’ny fety Somary nanahirana ny fitateram-bahoaka
Na dia azo nambara aza hoe nilamina sy nalalaka ny fifamoivoizana teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina azy nanomboka ny 31 desambra 2018, dia henjakenjana ihany ny filaharana taksibe tamina toerana maro.
HETSIKA FARAN’NY TAONA
Mafimafy ho an’ny vahoaka Malagasy iny taona 2018 vao avy nodiavina iny ary nibaribary izany teo amin’ny lafiny fahefa-mividy.
Krizy ara-bola tany Etazonia 10 taona aty aoriana mbola misy takaitra
Tena sarotra tamin’ny Amerikanina ny nanarina ny rafitra ara-bolany taorian’ny krizy ara-bola navaivay tamin’ny taona 2008. Amin’izao fotoana izao dia manome 6 hatramin’ny 7% amin’ny toekarena manontolo ny rafitra ara-bola dia ny banky sy ny fiantohana raha 10% talohan’ny krizy.
Minisiteran`ny Fitsarana Hampihena ny isan`ireo voafonja tsy mbola notsaraina…
Olana sedrain`ny fonja manerana ny nosy indrindra eny Antanimora ny fahatereny.